Tantara sy tantara an-tsary 10 tsara indrindra tamin'ny 2015 | Famoronana an-tserasera
Tantara sy tantara an-tsary 10 tsara indrindra tamin'ny 2015
Ity taona lasa ity dia taona iray niavaka ho an'ny indostrian'ny boky tantara an-tsary sy sary. Araka ny ho fantatry ny mpankafy maro, nanatri-maso taona iray isika izay nisehoana sanganasa kanto tsy mampino amin'ny endrika isan-karazany: Action, drama, terror ...
Ity misy fifantina ohatra tsara folo miteny ho an'ny tenany ary raha manana ny fotoana ilaiko ianao dia azoko antoka fa rehefa mamaky azy ireo ianao dia tsy hanenenanao izany.
Talohan'ny famonoana sy fahafatesany dia efa nanana mpankafy be i Adrian Tomine noho ny sangan'asany mitondra ny lohateny hoe 'Shortcomings' sy 'Scenes from an Impending Marriage'. Killing sy Dying kosa dia nanisy fiovana lehibe tamin'ny asany ary nanangana azy halaza mba hahatonga azy ho iray amin'ireo mpanakanto malaza indrindra ankehitriny. Ity asa ity dia azo adika ho toy ny lahatsoratra miady amin'ny famoizam-po amin'ny fiainana maoderina. Tsy misy isalasalana fa boky tena tsara.
'Descender' dia mitantara ny tantaran'ny robot tanora amin'ny alàlan'ny andian-tsary mamiratra sy maivana izay manasa anao hanohy hamaky azy io satria tsy isalasalana fa famakiana tena mahafinaritra. Ity asa ity dia nahazo fankasitrahana be pitsiny saika manerana an'izao tontolo izao ary nosoratan'ny mpamorona nahazo loka loka Jeff Lemire. Ny fahombiazany dia eo tokoa ka tsy mila liana amin'ny habakabaka ivelany ianao mba hitiavanao an'i Descender.
'Southern Bastards' dia asa be herim-po, mahafinaritra ary tena lehibe tany am-boalohany izay manana ny asan'ny atsimo ho toy ny axis afovoany. Voatendry ho an'ny Eisner Awards tamin'ny taona 2015 ho toy ny sanganasa serial tsara indrindra. Ny antony? jereo fotsiny ny antony mahatonga ny olona maro lasa tia an'ity tantara ity. Tsy misy fisalasalana, atolotra ho an'ireo tia ny tantara an-tsary.
'The Wicked + The Divine' dia tantara an-tsary mahafinaritra noforonin'ny mpanoratra Kieron Gillen, Jamie McKelvie, Matt Wilson, Clayton Cowles, ary Hannah Donovan. Ny fahafantarana fa ny ankamaroan'ireo mpanakanto ireo dia niara-nandray anjara tamin'ny sanganasa toa ny 'Phonogram' sy ny 'Young Avengers' ary indrindra rehefa nahita ny vokatra tsara nananan'ireto sanganasa ireto dia tsy mahagaga raha niara-nanomboka tamin'ity haitao sary ity indray izy ireo. Mahagaga ny kalitao ary tena misy ny fiolahana.
Fandraisana an-tsehatra mahafinaritra ity amin'ny asan'ny kamboty sci-fi izay nanapaka ny karazany ary lasa karazana fanitarana saina, The Odyssey.) Fantatra izany, izay tia haisoratra sy famoronana tsara dia tsy afaka ny ho liana amin'ny 'ODY-C'. Ny zava-kanton'ny psychedelic Christian Ward dia tena mahavita mitondra an'io klasika io amin'ny fiainana ary ny tsara indrindra amin'ny rehetra, dia manao izany izy tsy misy tahotra ny fampiasana loko, satria manome antsika sary lalina sy lalina.
Tanora roa no mandeha amin'ny hazakaza-tsoavaly miaraka amin'ny fiara halatra, kitapo feno vola, hery lehibe ary 45. Angamba tsy izao no fotoana mety hahitana fa tena tsy mifankahalala mihitsy izy ireo. Tsy haiko ny momba anao, fa miaraka amina famaritana toy izany dia tsy afaka ny tsy handray tanana tamin'ity tantara ity aho. Ny vokany? Vakiteny mahafinaritra sy mampiala voly, tsy isalasalana fa asan'ny zavakanto izay hangalatra ny foto-kevitsika.
Raha miverina amin'ny tantara maizina sy mifono mistery nataon'i Stephen King isika, i Wytches dia napetraka tao amin'ny lalan-kazatra iray ihany ary voavaha ho tantara an-tsary tonga lafatra ho an'ireo rehetra tia tantara mahatsikaiky. Miaraka amin'ny zavakanto noforonin'i Jock sy ny tantaran'i Scott Snyder dia ho lasa sehatra mazava ny valiny: Mamaky azy amin'ny misasakalina ianao ary mirehitra ny jiro rehetra.
'Harrow County' dia famakiana manelingelina fa iray ihany koa amin'ireo sanganasa izay amin'ny alalàn'ny toetrany mampiavaka azy sy ny hatsarany dia mahazo hatsarana hafahafa nefa tena tsara tarehy tokoa. Raha fintinina, angano gothic amin'ity 2015 ity izay handrava ny masonao ary hanakana anao tsy handao ny pejiny na dia tianao aza izany. Azo antoka raha olon-tiana miafina ianao dia ho anao.
Tena mpankafy sary an-tsary aho Matt Taylor, saingy rehefa hitako fa niara-niasa tamin'ny Ales Kot amidy indrindra izy hamorona 'Lobo', dia noheveriko fa sombin-javatra manokana dia ho avy. Mampalahelo fa nanapa-kevitra ny handao ilay tetik'asa i Taylor ka tsy hisy ny tohiny. Raha tianao ny sanganasan'ny mpanoratra dia iray amin'ireo ilainy izany.
'Paper Girls' dia asa iray izay compendium tsy mitongilana, tantara foronina izay miverina amin'ny fiandohan'ny tantara an-tsary avy amin'ny prisma estetika. Tsy isalasalana fa soso-kevitra indrindra indrindra raha tianao ny asan'i Brian K. Vaughn.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tantara sy tantara an-tsary 10 tsara indrindra tamin'ny 2015
Fahatoniana amin'ny 'Mena' avy amin'i Igor Piwowarczyk
Ity Krismasy ity dia namintina tamina fanambarana 15 tsy hay hadinoina